IMIPHEZULU YEETAFILE YEGRANITE (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imiphezulu yeetafile yeGranite (Isikhokelo sokugqibela)
Zininzi izizathu zokuba abanini khaya bakhethe imiphezulu yeetafile zegranite ekhitshini labo. Phezulu kwoluhlu kungenxa yokuqina kwegranite. Ilitye lendalo lihlala ixesha elide kakhulu kwaye lilungele ukuba lisetyenziswe kwindawo enjengekhitshi. Ukongeza, izixhobo zokubala zegranite zintle ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala onokukhetha kuyo. Ingaba uthenga ikhaya elitsha okanye ulungisa kwakhona, i-granite iyaqhubeka ifunwa kakhulu emva kwezinto zokubala eziqhubeka zikhula ekuthandeni.
Yintoni igranite? I-Granite lilitye elilukhuni eline-quartz, mica, feldspar kunye nezinye izimbiwa. Yenziwe nge-crystallization ye-magma phantsi komphezulu womhlaba. Le nkqubo idala ukubonakala okumnyama okubonakalayo kwimigca yegranite emhlophe, epinki okanye ngombala ongwevu.
Kukungaguquguquki kunye nokuqina kuyenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo lwezixhobo zabantu abafuna ukulungisa ngokutsha kunye nokwakha izindlu zabo. Izimbiwa ezikhoyo elityeni zivelisa ubuhle bazo obwahlukileyo obongeza isibheno endlwini yakho ekungekho elinye ilitye elinokugqitha. Ingasetyenziswa njengonyango lwaseludongeni, izinto zokwenza umgangatho okanye umphezulu wekhawuntala.
Isicelo esithandwayo kakhulu segranite ezindlwini sifana nekhawuntala yekhitshi okanye indawo yokuhlambela ilize yangaphezulu.
Iitafile Granite Iindleko
Iindleko zeGranite ngeenyawo nganye
Iindawo ezigqibeleleyo zokuthenga iGranite
Itafile yeGranite igqiba
Iindidi zeGranite Edge
Indlela yokulinganisa iitafile zeGranite
Ukufakwa kweGranite Counter ephezulu
Abanye izibonelelo Ukusebenzisa igranite njengendawo yokusitha yile:
Imiphezulu yeetafile zeGranite azinciphisi ixabiso.
Yongeza ixabiso ekhayeni lakho.
Kulula ukuyigcina kwaye ifuna umgudu omncinci ukuyicoca.
Ukuba itywiniwe ngokufanelekileyo, ikwangumbala onganyangekiyo.
Icocekile kuba ayinabushushu kunamanye amatye endalo anjengemabhile.
Ayikwazi ukumelana nokukrwela, kwaye ayonakalisi ngokulula kumanqaku eemela.
Iyakwazi ukumelana nobushushu kwiimbiza neepani.
Inenkangeleko ekhanyayo eyahlukileyo eyenza ukuba nasiphi na isithuba sibonakale.
I-aesthetics ebonakalayo enikwayo ayinasiphelo kwaye ayinasiphelo.
Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala kunye neepateni ezinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zoyilo. Jonga uluhlu lwethu lwe Isoftware yoyilo lwangaphakathi Apha.
Kwelinye icala, inyengane inezinto ezininzi ezibuthathaka. Abanye iintsilelo Ukusebenzisa igranite njengendawo yokusitha yile:
I-Granite ibiza kakhulu xa kuthelekiswa namanye amatye endalo.
Kudinga ukutywinwa kwamaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba akukho zilwelo ziya kungena kuyo. Imiphezulu yeetafile zeGranite ezingatywinwanga kakuhle ziya kufuna ibala, ubumdaka kunye nokuchitheka.
Ufakelo lusebenza kakhulu.
Ukuba ufuna ukutshintsha inkangeleko yegumbi lakho okanye umbala wayo, yonke imiphezulu yeetafile kufuneka ikhutshwe ngokupheleleyo.
Ukuba ujonge ukubonakala ngokufanayo, igranite ayinakuba yinto elungileyo kuba islabhu nganye inokwahluka ngokupheleleyo kwenye.
Ngenxa yobunzima bayo, ifuna inkxaso eyongezelelweyo yolwakhiwo ngobulumko.
Iindleko zokuthenga igranite imiphezulu yeetafile yasekhitshini ziya kwahluka ngokwendalo ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nokunqaba kwelitye olikhethayo. Enye into ebalulekileyo kukuba ngaba uthenga into ebambekayo yesiqwenga okanye iziqwenga ezininzi ezinokuhlisa iindleko. Icala elisezantsi lokusebenzisa iziqwenga ezininzi kwitafile yekhitshi lakho iya kubangela umphetho ongabonakaliyo obonakalayo kumphezulu. Ukuthenga iintsalela zegranite yindlela yokunciphisa iindleko kwaye unokufumana isiqwenga sexabiso lenyengane esingaphantsi.
Iindleko zezinto zegranite zikwi- $ 100 ukuya kwi-200 yeenyawo ngonyawo wesikwere. Ngokukodwa, i-granite slabs ibiza malunga ne- $ 5 ukuya kwi-15 yeenyawo zenyawo nganye, ngelixa iithayile zegranite zibiza $ 5- $ 20 ngonyawo wesikwere.
Imiphezulu yeetafile Granite Ixabiso unyawo nganye nganye
Ungathenga imiphezulu yeetafile yeslabite esongwe ngamadola angama-50 ukuya kuma-60 ngonyawo wesikwere, ngelixa iithayile zemigangatho yeetafile zegranite zibiza i-10 ukuya kwi-40 zeedola ngeenyawo.
Ngenxa yobungakanani bayo, iizilebhu zegranite zibiza kakhulu kwimimandla emikhulu. Iithayile zeGranite ziya kusebenza kakuhle kwiikhitshi ezinobume obukhethekileyo bokubeka kunye nokubekwa.
Ixabiso leemiphezulu zeetafile zeGranite ngeenyawo zenyawo nganye xa ifakiwe
Ngenxa yenkqubo enzima yabasebenzi, ukufakwa kwegranite kukwabiza ngaphezulu xa kuthelekiswa nezinye izinto zekhawuntari. Ngaphandle kwento ngokwayo, iindleko ezongezelelweyo ezinokuthi ziqwalaselwe ekufakweni komphezulu wegranite zezi zilandelayo:
Izixhobo (izinto ezisetyenziswayo ngaphandle kwegranite) - $ 400 ukuya kwi-600 yeedola
Ukuhlela - $ 200 ukuya kwi-300
Amaqela- $ 200 ukuya kwi-300 yeedola
Ezabasebenzi- $ 300 ukuya kwi- $ 500
Ukufaka ii-countertops ze-granite kunokubiza kakhulu, ke qiniseka ukuba ulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali ngaphambi kwexesha. Iindleko zegranite ngonyawo wesikwere xa zifakwe zijikeleze i-80 ukuya kwi-150 yeedola ngonyawo wesikwere. Kuya kuthatha malunga ne-2000 yeedola ukuya kwi-4000 yeedola (kubandakanya negranite) ukubonelela ikhitshi lakho ngetafile yentsimbi. Nangona ixabiso, imiphezulu yeetafile lenyengane bakhonze njengotyalo mali enkulu kuba iya kuhlala ebomini.
Izinto ezichaphazela amaxabiso eGranite
Zininzi izinto ezichaphazela ixabiso lenyengane. Ngokuqhelekileyo ixabiso lixhomekeke ekubeni zingaphi iimaminerali ezithambileyo ezikhoyo ekubunjweni kwayo, umbala wayo kunye nendlela enqunywe ngayo.
Umbala. Imibala yegranite enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omfusa kunye nobomvu ibiza kakhulu kuneminye imibala. I-Beige kunye nohlaza zinonikezelo oluninzi ngakumbi kwiimarike ezenza ukuba zitshiphu.
Ubungakanani beSlab. Iizilebhu ezinkulu zegranite zibiza ngaphezulu kwaye kunzima ukusebenza nazo kufakelo.
Ukutyeba. I-granite ejiyileyo ibiza kakhulu kuba ihlala ixesha elide.
Imvelaphi. I-Granite ihlala ivela eBrazil, eSpain, eIndiya, e-Itali nase China-ezimbini zokugqibela ziyimvelaphi eqhelekileyo. I-China yenza elona xabiso liphantsi kuba zinendleko zabasebenzi ezisezantsi. I-Granite evela e-Itali naseBrazil zezona zibiza kakhulu. Nangona ii-slabs ezimbini ezikumgangatho olinganayo zinokulingana, ilizwe lemvelaphi lichaphazela ixabiso legranite kakhulu. Iindleko zokuhambisa ngenqanawa zongeza kwixabiso lentengiso legranite. Umzekelo, igranite yase-Italiya ibiza amaxabiso asezantsi kakhulu e-Italiya kuba baya kuthatha iindleko ezingaphantsi ukuhanjiswa ukusuka kwimvelaphi yayo.
Ukuhlelwa kwegranite. I-Granite ingaba ibanga eliphantsi, eliphakathi okanye eliphakamileyo. Ibanga eliphantsi okanye ibakala lezorhwebo lenyengane linezimbiwa ezithambileyo ezixutywe kuzo, yiyo loo nto zibenza ukuba babe semngciphekweni wokonakaliswa. Banokwahluka okuncinci ngombala. Igranite ekumgangatho ophakathi inemibala esulungekileyo kodwa ayiboneleli ngokungafaniyo. Igranite yodidi oluphezulu yeyabo banemibala enqabileyo kunye neepateni ezingaqhelekanga.
Iindawo ezifanelekileyo zokuthenga i-granite zivela kumenzi wamatye kunokuba ivenkile yokuphucula ikhaya. Abathengisi ababodwa banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho kwaye banokubakho okufumanekayo okulungele uku-odolwa. Olunye ulwazi lokuthenga kumthengisi wegranite zezi zilandelayo:
Ukuthenga ngobuninzi kwiikontraki kunye nabaqambi bokugcina izinto kungakongela imali ebonakalayo kuba banokukunika ngexabiso eliphantsi.
Banikela ngamakhulu emibala ebonakalayo, iipateni kunye nokugqiba ukukhetha kuzo. Iivenkile zokuphucula amakhaya zihlala zinonikezelo olunqunyelweyo lokukhetha malunga ne-30.
Ufakelo lukwanikezelwa ngabenzi beengingqi kunye neekhontraktha. Ungabacela ikhontrakthi epheleleyo ebandakanya zombini izinto ezibonakalayo kunye neendleko zomsebenzi.
Ngaphambi kokuba uthenge qiniseka ukuba ujongana nomenzi wamatye owaziwayo ome kwimveliso yawo. Khangela ukuqinisekisa ukuba banikezela iwaranti kwilitye labo eligubungela umonakalo okanye ukungcola. Qinisekisa ukuba ufumanisa ukuba iwaranti ilungile kangakanani kunye nenani elipheleleyo lokugubungela. Rhoqo ukufakwa kwamatye esemgangathweni kuya kubonelela ngenkonzo kunye nokunakekelwa kwabathengi ngokwandiswa kwexesha lewaranti elinokukukhusela ukuba kukho into engahambanga kakuhle okanye ukubonelela ngolondolozo njengokulungisa iintanda okanye ukutywina umphezulu kunye nokuthunga amaxesha ngamaxesha.
Ikwangumbono olungileyo ukuqinisekisa ukuba inkampani iyila kunye / okanye ukufaka igranite yakho ayikhupheli umsebenzi ngaphandle kweekhontrakthi ezikumgangatho osezantsi. Qinisekisa ukuba bayawenza ngokwabo umsebenzi ukuze ufumane imveliso esemgangathweni.
I-Granite iza nemibala eyahlukeneyo kunye neepateni ezahlukeneyo. Imithambo, iinkozo kunye nokuqengqeleka kwamatye kulilungisa kakuhle eli litye lendalo elenza libonakale linomtsalane kunye nokhetho oluthandwayo kubanini bamakhaya nakwabaqambi. Ukusukela kwibala lokungathathi hlangothi ukuya kwiithowuni zejel, yongeza uphawu olwahlukileyo nakweliphi na isithuba.
Nalu uluhlu lwezona zithandwa kakhulu imibala lenyengane kwii-countertops kwiimarike kunye nezinye iingcebiso zokulandela ekukhetheni uhlobo olufanelekileyo kwiimfuno zakho:
Granite emhlophe. Igranite emhlophe ihlala ijongwa kancinci njengoko abanye beyibona icace gca okanye ilula, kodwa yintoni eyenza ukuba ibe ngumthunzi onomdla kukuba inemithambo kwaye inamatye athile. Igranite emhlophe emsulwa ikwakhona kwimarike kodwa kunzima ukuza ngayo. Ikwadala ukucoceka, ukubukeka okucocekileyo. Njengoko umthetho jikelele kuyilo uhamba, umhlophe wenza nasiphi na isithuba sibonakale sikhulu, kufanelekile kumakhitshi amancinci.
Umbala weKhabinethi ubhangqwe ngcono kunye: Umnyama omnyama okanye nawuphi na umbala ongathathi hlangothi
Umxholo woyilo ulungele kakhulu: Iikhitshi zakudala okanye zale mihla
Ndwendwela eli phepha ukuze ubone ifayile ye- imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe igalari yemifanekiso.
Beige Granite. I-Beige granite ikwangumbala oguqukayo. Inkangeleko yayo eyahlukileyo ibonakaliswa yimibala exutywe kuyo njengamnyama, ngwevu nomdaka. Inika ukujongwa okungapheliyo okuya kuhlala ngaphezulu kweminyaka.
Umbala weKhabinethi ubhangqwe ngcono kunye: Iikhabhathi ezinombala omnyama nokukhanya
Umxholo woyilo ulungele kakhulu: Iklasikhi, iMveli, uVictoria, ilizwe
Ndwendwela eli phepha ukuze ubone ifayile ye- imiphezulu yeetafile zakhiwe ngexabiso lenyengane igalari yemifanekiso.
IBrown Granite. Igranite emdaka ngokubanzi ivusa imvakalelo efudumeleyo. Iyadibana nomthi kodwa ikwadala umahluko onzulu kunye nekhabhathi egqityiweyo yokukhanya.
Umbala weKhabinethi ubhangqwe ngcono kunye: iikhabhathi ezinemibala ekhanyayo (ukugqitywa kweenkuni ezifana ne-Oak, Maple, Birch, Light Cherry, Pine kunye neBirch)
Umxholo woyilo ulungele kakhulu: Ilizwe, iRustic
IGranite emnyama. I-granite emnyama yeyona nto intle kwaye iyothusayo kuyo yonke imibala. Inobuntu obucace gca ngenxa yamachaphaza amancinci esilivere ayenza ikhanye. Kwelinye icala, enye inketho yiJet emnyama inyengane ethe tyaba kukugqitywa kwegranite emnyama ecwebezelayo nebengezelayo. Ukuba usebenzisa lo mbala, musa ukubufihla ubuhle bawo ngokuwudibanisa noyilo lwekhabhathi oluhonjiswe kakhulu. Kunqande ukuyisebenzisa ngekhabhathi emnyama kwaye uyisebenzise njengendawo ekugxilwe kuyo ekhitshini lakho.
Umbala weKhabinethi ubhangqwe ngcono kunye: iikhabhathi ezimhlophe
Umxholo woyilo ulungele kakhulu: Namhlanje, okwangoku
Ndwendwela imiphezulu yeetafile lenyengane emnyama igalari apha.
I-Granite ebomvu. Igranite ebomvu yenye yezona zinqabileyo kwaye ikhetheke kakhulu kuyo yonke imibala yegranite. Umbala wayo osisityebi unikezela ngumahluko omkhulu kwikhabhathi ekhanyayo. Inokusebenza njengesiqwengana esibonisa iso ekhitshini lakho. Ukuba ngobulumko ubhangqiwe ngeekhabhathi ezikhanyayo kunye nephalethi yombala othulisiweyo yeendonga, oku ngokuqinisekileyo kuya kuvelisa ikhitshi elimangalisayo.
Umbala weKhabinethi ubhangqwe ngcono kunye: iikhabhathi ezikhanyayo
Izipho imibono yosuku lokuzalwa komyeni
Umxholo woyilo ulungele kakhulu: Umxholo waseMpuma okanye waseAsia
Ukukhanyisa kukwayinto ebalulekileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo ekukhetheni ipateni kunye nombala wegranite ekhitshini lakho. Ngeendawo ezinokukhanya okuncinci okanye okungekho ukukhanya kwendalo, khetha inyengane enemibala ekhanyayo. Kwiindawo ezinokukhanya okwaneleyo, imibala emnyama iya kusebenza kakuhle.
Granite eluhlaza. Igranite eluhlaza ityebile kwaye ayiqhelekanga. Amandla ayo aphambili kukuba inokudityaniswa ngempumelelo phantse nayo nayiphi na ikhabhathi yombala wekhitshi. Ukungafani kweepateni zegranite eziluhlaza kunye nezitayile zikwenza ukuthelekisa kunye neekhikhini zakho kugqiba kube lula.
Ndwendwela imiphezulu yeetafile lenyengane eluhlaza igalari apha.
Imiphezulu yeetafile zeGranite zineentlobo ezintathu zokugqitywa: ukugqitywa kokugqitywa, ukugqitywa kokugqitywa kunye nokugqitywa komlilo.
Ukugqitywa okuphosiweyo yigranite enokukhanya okuqaqambileyo. Isipili esifana nokubonakala sibonakalisa ukukhanya kakuhle kusenza sicebise ukuba sisetyenziselwe iindawo umntu anokufuna ukutsala umdla kuzo. Oku kuyenza ibe lolona khetho luthandwayo lokugqitywa kwegranite kwindawo yokuphekela ekhitshini. Amatye avelayo akhoyo kwi-granite abonakala kwiindawo ezikhanyiswe kakuhle ezenza ukuba iindawo zibonakale zintle kwaye ziyamangalisa. I-granite ephosiweyo isebenza kakuhle kunye neekhitshi zangoku, zangoku. Kulula ukuyigcina kunokugqitywa kokugqibela kunye nesiphelo esivuthayo. Ingasetyenziselwa njenge izinto zokwadala yeendawo zokuhamba kancinci.
Olunye uhlobo yi- ukugqiba ukugqiba ene-buffed okanye matte imbonakalo. Ngokungafaniyo nokugqitywa okucociweyo, oku akukho bume bubonakalisayo kwaye bunobumba obucekeceke. Nangona iswele ukukhanya, inendawo egudileyo eyenza ukuba kube lula ukuyicoca. Xa isetyenziswa njengendawo yokubeka ikhitshi ekhitshini, isebenza kakuhle ekongezeni inkangeleko ethambileyo eyenza umahluko omkhulu kwikhabhathi ephezulu yokuhombisa.
Uhlobo lokugqibela ngu Ukugqitywa komlilo ebonakaliswa buburhabaxa bayo. Oku kufezekiswa ngokufudumeza ilitye kubushushu obuphezulu kakhulu, okwenza ukubonakala kwelitye kube kwendalo ngakumbi kwaye umbala walo uphele ngakumbi. Amanqanaba okusila ayahluka ngokuxhomekeka kubunzima bezimbiwa ezikhoyo elityeni. Ukugqitywa kwegranite evuthayo kuqheleke kakhulu kwimibala ethulisiweyo enje ngwevu okanye imibala emdaka. Ixhaphake kakhulu kwiindawo ezingaphandle nakwindawo eziqhele ukufuma kwaye isebenza kakuhle nezindlu ezineerustic.
Emva kokukhetha umbala wekhawuntara yakho yegranite, enye into ekufuneka uthathe isigqibo ngayo yiprofayili yomda wekhawuntari yakho. Ukubeka ngokulula, iprofayile esecaleni yimilo ethathwa ngumda. Iyafumaneka kwiimo ezininzi ngokuxhomekeke kwiindleko nomsebenzi. Inokuba ngohlobo lwesangqa esisisiqingatha, isikwere, isikwere, ukubala ezimbalwa. Imiphetho yesiqhelo ikwafumaneka kubenzi bezinto ezikhethiweyo kunye nabathengisi, ungalibali ukubabuza ukuba unoyilo olwahlukileyo engqondweni.
Ngaphandle kwexabiso lobuhle elongeza ekhitshini lakho, injongo ye umjikelo ojikeleziweyo ogudileyo Kukuthintela igranite ekucimeni ngokulula, yiyo loo nto ukongeza kule minyaka ikhawuntari yakho iya kuhlala. Nangona ilitye lendalo libonakaliswa ngokuzinza kwalo, imiphetho engapholwanga ikhokelela kwiingxaki zexesha elide kuba ilitye linokuqhekeka ngaphakathi kwikona. Ngokumalunga nolondolozo, zikwalula ukuzigcina
Iitafile zifuna ujikelezo ngaphezulu komda ukukhulisa ubukhulu bezinto. Ubungakanani obuqhelekileyo beprofayili ejikeleziweyo zii-intshi ezinobunzima. Ubunzima obufunekayo beetafile zokuphikisana negranite zii-intshi ezi-1-1 / 2 zembali yomjikelo we-1/8 intshi.
Kukho ukwahlulwahlulwa kathathu ngokubanzi kweeprofayili zomda wangasentla: umda othe nkqo, umda ogosogoso kunye nomda omnandi.
Indawo etsolo emthebelele Yeyona ilula kuzo zonke iiprofayili apho incam yezixhobo zakho ezingaphezulu zilandela ukusika okulula okuthe ngqo.
Iiprofayili ezigobileyo kwelinye icala zizonke kwaye zinokuba zezisisiseko okanye ezintle. Olu lukhetho oluhle kakhulu kumakhaya anabantwana kuba benciphisa isidingo sokukhathazeka malunga nokuqaqanjelwa kweentloko kwiikona zetafile yakho ephezulu. Ithambisa ukuziva kwegumbi kwaye ifanelana nezitayile zoyilo zakudala kunye nezangoku.
Umda oqinisekileyo yeyona inzima kwaye yahlukile kuzo zonke. Ifuna abasebenzi abanezakhono kunye neminyaka yobungcali ekuphatheni inyengane yokusika ngokuchanekileyo. Ngokubiza kakhulu kunomphetho othe ngqo kunye nomda ogobile, uninzi lotyalo-mali lwexabiso kunye nomlinganiswa owongezwe kwikhaya lakho. Le mijelo inomdla wokubandezeleka xa isetyenziswa kakhulu. Eyona nto ibhangqwe kakuhle kunye nekhabhathi elula, ukwenza uyilo olugqibeleleyo lwekhitshi lakho. Olu lukhetho lobulumko ukuba ufuna ukwenza ingxelo kunye necomputer yakho.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lweeprofayili zomda oqhelekileyo wekhawuntala yakho yaphezulu:
Umda olula . Ikwabizwa ngokuba ngumda othe tyaba okanye umda othe ngqo, oku kuphawulwa ngeprofayile yesikwere esisiseko ebonisa ubungakanani obupheleleyo belitye. Ikwalona xabiso lusebenzayo kuyo yonke into eyenza ukuba ibe lolona khetho luthandwayo kubantu abalungisa ngokutsha kunye noyilo lweekhikhini zabo. Icocekile, ilungelelanisiwe kwaye iyahambelana nasiphi na isitayile yoyilo kunye nomxholo. Iikona nazo zijikelezwe kancinane, zathanjiswa kwisithuba seesentimitha ezi-3, ukunqanda ukonakala kwempahla.
Ipensile. Iprofayile yomda wepensile njengoko igama layo lisitsho, iyanqunyulwa ukubumba njengepensile. Inomphetho omncinci ojikeleze umphezulu welitye. Inoyilo oluthambileyo kunomphetho okhululekileyo okanye othe tyaba ngenxa yoyilo lwesikwere esijikeleziweyo. Isebenza kakuhle kwizithuba zesitayile sangoku.
Umda weBullnose. Ijikelezwe ngokupheleleyo ngamacala omabini ajikeleziweyo, i-bullnose edge ithambisa ukuziva kwayo nayiphi na indawo. Sisisiqingatha sesangqa esimilo esenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo kumakhaya achaphazelekayo ngokukhuselekileyo. Nangona kunjalo, azicetyiswa kangako kwiindawo ezilula ngokulula kuba ulwelo oluphalileyo luye ludla ngokuwa iikhabhathi. Isicelo esifanelekileyo kule nkangeleko yomda ukuba iziqithi ziphikisana nekhitshi ekhitshini. Uyilo lwayo lukwanobhetyebhetye kuba ilungele zombini kunye nezitayile zangoku zekhitshi.
IHolo Bullnose. Njengoko igama libonisa, ineprofayili egudileyo egudileyo enomphetho ongezantsi wasezantsi. Umjikelo ojikeleziweyo wongeza ijika kwaye ulungele zombini isitayile sangoku kunye nesala maxesha.
indlela yokuba ngumgcini womtshato
Umda ogqityiweyo. Umda otyhidiweyo ngowona ujonga ngokwendalo kuzo zonke iiprofayili ezisecaleni. Ebonakaliswe ngokugqitywa kancinci, ijongeka ngathi sisiqwenga setye esaphukileyo. Umda omdaka uyenza ilungele iikhitshi zesitayile se-rustic.
Ingxangxasi. Ingxangxasi yamanzi yenye yeendlela zokuyila ezikhoyo ekhitshini namhlanje. Amacala onke e-counter aqhubeka ngokuwa emaphethelweni, phezulu ukuya kwicala, kulandela ukuphakama kwekhawuntari. Ibizwa ngokuba yingxangxasi kuba iphela ngokugqibeleleyo kwaye iqukuqela isiya emgangathweni idala umphezulu ofanayo. Idibene neekhabhathi ezihlaziyiweyo zale mihla, inika ingxelo ecocekileyo kwaye intle.
UDupont Edge. Kuthathelwa ingqalelo ubume beprimiyamu yomahluko okwahluka kuyilo lwe-Ogee egobile. Endaweni yomda ogobileyo umda weDupont uqala nge-90 yeedigri emfutshane ehla iye kwi-engile egobile.
I-Ogee Edge. Umda we-ogee yiphrofayili esecaleni apho uyilo lunee-arches ezi-2 zokutshayela: i-arch concave engena kwi-arveve arch. Xa ijongwa kwicala, yenza ubume be-S. Ngenxa yesishwankathelo sayo esimangalisayo, ithathwa njenge-premium cut kwaye ibiza kakhulu.
Wotho Edge. Iprofayile ye-bevel yincam ene-45-degree degree, enokuthi ibe ngaphezulu okanye ezantsi komphetho ophezulu. Ubunzulu be-engile bunqunyiwe, ububanzi bendawo ebonakalayo bujongeka. Lunyango lonyango olusemdeni olunganeli nje ukukholisa ubuhle kodwa luyasebenza kwaye kuba kulula ukulicoca. Ifuna imiphezulu yeetafile ukuba ibe yi-1- 1 ½ intshi ubukhulu. Inenkangeleko yeklasikhi yokuhombisa kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kunye nekhitshi enamxholo okanye ilizwe elinamakhitshi.
Ezinye iintlobo zeeprofayili ezisecaleni ezingakhange zixutyushwe ngasentla ziintlobo zeentlobo ezisisiseko. Nayi eminye yemizekelo:
Umda oQhelekileyo: Ngqo nge-apron edge, Radius edge
Umjikelo ogobileyo: Ijika laseTuscan, i-Ogee bullnose, i-Ogee ngaphezulu kwe-bullnose epheleleyo
Umda weFancy: Umda weVersailles, umda weChiseled, i-Ovollo yamaRoma, i-Ogee ngaphezulu kweVersailles, i-Ogee ephezulu nasezantsi, iDemi bullnose, iDemi bullnose ngokuphuma
Ngaphandle koluhlu olubanzi lweeprofayili ezisecaleni ezikhoyo kwimarike, unokuqhagamshelana nomthengisi wakho wegranite ukulungiselela abavelisi bemiphetho yokusika yesiko ngenkangeleko ekhethekileyo yendlu yakho.
Granite Tile kunye Granite Iizilebhu
Kukho iindidi ezi-2 ezikhoyo zeetafile zokubala ezifumaneka kwimarike: ithayile kunye neslab. Xa ukhetha uhlobo lwegranite olulungele iprojekthi yakho, kufuneka uqwalasele izinto ezininzi. Enye yazo yindawo okanye isixa sendawo ekufuneka sigutyungelwe kwaye enye ukufakwa. Imiba nganye iya kuxoxwa ngakumbi kwesi sikhokelo sineenkcukacha.
Iizilebhu zeGranite zilungele iiprojekthi ezifuna isixa esikhulu sendawo yokubaleka ephezulu. Ngokwesiqhelo, isileyiti esinegranite esemgangathweni zii-4 ukuya kwi-5 iinyawo (W: 1.2 yeemitha ukuya kwi-1.5 yeemitha) ububanzi, i-7 ukuya kwi-9 yeenyawo (L: 2.1 ukuya kwi-2.7 yeemitha) ubude, kunye nobukhulu be-1 ¼ intshi (2 ukuya ku-3 cm). Ngenxa yobunzima bayo, ayicetyiswa ukuba isetyenziswe kwiprojekthi ye-DIY / Do-It-Yourself njengoko ifuna abasebenzi abangaphezulu ukuze baphakamise kwaye babeke endaweni. Kuyacetyiswa ukuba ushiye ukuphatha okufanelekileyo kwegranite slabs kwiingcali. Ungandiqesha ikontraka okanye ujongane ngqo nomboneleli wakho wofakelo.
Iizilebhu zakhiwe ngobuhle obungenakuthelekiswa nanto. Ngenxa yobukhulu bayo, ivelisa ukubonakala okufanayo ngaphandle kwemiqolo ebonakalayo kunye nonxibelelwano. Ikwasusa isidingo sokusebenzisa i-grout, eyenza ukuba ithambekele ekungcoleni kwaye uthuli lufakwe phakathi. Isebenza ngcono kwiiprojekthi ezifuna ukujongwa okwangoku, okwangoku.
Nangona kubiza ngaphezu kweethayile zegranite, iizilebhu zegranite zibhetele ekuhambeni kwexesha kuba kulula nokuzigcina.
Ezinye ezisebenzayo iingcebiso ekufuneka ziqwalaselwe xa uthenga igranite oku kulandelayo:
Vavanya izinto ngaphambi kokuthenga. Jonga ngononophelo nawuphi na umngxunya, iintanda ezinemingxunya, amanqaku e-chip kunye nemiphezulu engalinganiyo. Ubukho bezo zinto zenza ukuba izinto zithambekele ngakumbi ekonakaleni.
Thenga igranite eninzi. Esi sesinye sezona zisombululo zisetyenziswayo eziya kuthi zibonise umvuzo wazo ngokuhamba kwexesha. Kukulungele ukuthenga igranite etyebileyo kuba ezona zityebileyo zibuthathaka ngakumbi kwaye ziya kufuna inkxaso ethe kratya. Ngokuqhelekileyo zibiza ngaphezulu, kodwa zisebenza njengotyalo-mali olukhulu ngenxa yomgangatho ophezulu. Ubungakanani obufanelekileyo begranite yi-intshi enye.
Cela iisampulu. Buza umthengisi wakho ngeesampulu ezikhoyo zemibala yegranite kunye neepateni ozikhethayo. Oku kubaluleke kakhulu ekuhambiseni umbala kunye nekhabhinethi yakho. Unokufumana umbono ngokubanzi wokuba ikhawuntari yakho ingabonakala njani xa ibekwe kwikhabhinethi yakho kwaye unciphise isidingo sokubuyela umva nakumboneleli xa uzama ukwenza isigqibo sokugqibela sokuba uza kuthenga bani.
Khetha i-granite engenamthungo. Ayipheleli ekubeni ijongeke ngokungafaniyo kodwa kulula ukuyigcina.
Khangela umgangatho we-granite we-polish. Unokwenza oku ngokusebenzisa uvavanyo olulula. Sebenzisa nayiphi na into ebuntsimbi ukrweca umphezulu womathiriyeli, ukuba ushiya ngasemva uphawu, ibonisa igranite engacocwanga kakuhle.
Umdlalo wombala. I-slab nganye yegranite yahluke ngokupheleleyo enye kwenye, ukuba ufuna ukuqinisekisa umbala ofanayo, thenga ii-slabs ezizayo zenza ibhetshi efanayo.
Ithayile yeGranite lolunye uhlobo lwegranite olufumaneka kwimarike. Iza kubungakanani obunokulawuleka obenza ukuba kube lula ukuphatha. Ubungakanani obuqhelekileyo beethayile zegranite zihlala zii-intshi ezili-12 x 12 intshi.
Iithayile zeGranite nazo zibiza kakhulu, malunga neepesenti ezingama-50 zibiza ngaphantsi kune-granite slabs. Kuba beza ngobukhulu beemodyuli, awugcini ngokugcina izinto ezibonakalayo ngokwazo kodwa nenkqubo yokuqamba kunye nofakelo. Malunga nesicelo, baya kusebenza kakuhle kwiikhawuntari ezinemilo enzima. Nangona ifikeleleka ngakumbi, kuthatha inkqubo ende yofakelo ngokubeka iithayile ngendlela ethile.
Ukudibanisa iziqwenga zeethayile zegranite kunye, i-grout iyafuneka ukugubungela iiseams. I-grout kufuneka ibe nombala ofanayo kunye negranite kwaye kufuneka iphinde isetyenziswe rhoqo ukuqinisekisa ukuba akukho masuntswana okutya okanye ukungcola okuxineneyo phakathi. Elinye icala elisezantsi lemigangatho ekhoyo kwiithayile zegranite kukuba yenza iithayile zegranite zomgangatho ongaphantsi kwesilayidi iphela. Uyilo lobulumko, inika ukhetho ngakumbi lwesitayile.
Umbuzo obuzwa rhoqo kukuba zingakanani iitafile zegranite ezingqindilili? I-Granite iyafumaneka kubukhulu obahlukeneyo, ubukhulu becala ¾ i-intshi (ejikeleze iisentimitha eziyi-1.90) ukuya kwi-intshi ezi-1-1 / 4 (3.175 iisentimitha) ubukhulu. Nangona kunjalo, obona butyebileyo obulunge kakhulu kwikhawuntara yekhawuntara ephezulu zii-intshi ezi-1-1 / 4 okanye iisentimitha ezi-3.
Njengomgaqo jikelele kwishishini, ukujiya kwegranite, kuyabiza kakhulu. Xa ukhetha ubukhulu begranite efanelekileyo kwikhawuntala yakho, kukho izinto ezininzi ekufuneka ziqwalaselwe. Okokuqala kukujonga okanye isitayile ofuna ukusifumana. Amanqwanqwa aphezulu e-counter asebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kakhulu kuyo nayiphi na ikhitshi kwaye ayazalisa ngokugqibeleleyo kuyilo lwangoku nolwanamhlanje.
Ngaphandle kwalokhu, umbala we-counter top oyikhethileyo uchaphazela nesigqibo sakho. Ngokuqhelekileyo, imibala emnyama ihlala ifumaneka kwiindidi ezixineneyo kunezo zilula. Okokugqibela, uhlahlo-lwabiwo mali olwenzileyo ludlala indima ebalulekileyo ekukhetheni ukutyeba kwekhawuntari yakho ephezulu. Izitena zegranite ezityebile zinqabile ngokubenza zibize kwiimarike. Esi sizathu sokuba zihlala zisetyenziselwa indawo ezincinci ezinje nge Itafile yesiqithi sekhitshi .
Ukulinganisa i-counter top yakho yofakelo lwegranite kuthatha kuphela umzamo omncinci. Ezi zixhobo oya kuzifuna:
Ipensile okanye usiba
Umgaqo ngokubanzi oza kuwulandela kukulinganisa indawo yakho yokubala kabini. Uqikelelo malwenziwe ngononophelo, ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo. Nazi ezinye iingcebiso onokuthi uzilandele ekulinganiseni indawo yakho yokubala:
Zoba idayagramu yesithuba sakho esiphambili. Khumbula ukufaka i-backsplash kumzobo wakho kunye nomlinganiso,
Faka isinki, isitovu sokupheka okanye nasiphi na isixhobo esiza kucwangciswa kwigranite. Udinga imilinganiselo yabo yokusikwa komphezulu.
Sebenzisa iteyiphu ukulinganisa ubude bendawo yokubala (udonga eludongeni). Beka ileyibhile efanelekileyo yemilinganiselo kumzobo / kumzobo wakho.
Linganisa ubunzulu. Ubunzulu bekhawuntari esemgangathweni zii-intshi ezingama-25.5 okanye ezijikeleze iisentimitha ezingama-60.
Linganisa ubude bokubuyela umva (oku kuyafana nobude bekhawuntari yakho) kunye nokuphakama komqolo. Ukuphakama komgangatho we-backsplash zii-intshi ezi-4 okanye iisentimitha ezili-10.
Phinda ujonge imilinganiselo yakho. Gcina ukhumbula ukuba oku kufuneka kwenziwe ngokuchanekileyo ukuze uhlale ujonga ukuba ulinganise ngokuchanekileyo kwaye ulebhelishe umzobo ngokufanelekileyo.
Xa yonke imilinganiselo igqityiwe, yenza ikhowudi yomfanekiso. Landela le fomyula ilula yemilinganiselo ethathwe nge-intshi:
(LENGTH of counter x DEPTH of counter) ÷ I-intshi ezingama-144 = iinyawo ezisikwere zizonke phezulu
(HEIGHT of backsplash x LENGTH ye-backsplash) ÷ I-intshi ezingama-144 = i-square iyonke inyawo le-backsplash
Nantsi isampulu yokubala elandela ifomula enikiweyo. Ukuba ubude bekhawuntala yakho zii-intshi ezili-100 kwaye ubunzulu zii-intshi ezingama-29:
(L x D) ÷ 144 = iyonke sq ft
100 kwi x 29 kwi = 2900 sq kwi
Isipho seminyaka esi-8 somtshato
I-2900 sq kwi-144 sq kwi = 20.138 sq ft
Ukufakwa phezulu kwe-Granite yinkqubo enzima yokusebenza efuna imilinganiselo echanekileyo kunye nomsebenzi wezakhono. Uhlobo lwezinto ozisebenzisayo, nokuba kungaba yitayile yegranite okanye i-slab yegranite iya kumisela amanyathelo ekufuneka uwalandele kufakelo.
Iithayile zeGranite zisenokuba yinkqubo yokwenza into yokuba uzenzele ngokwakho umntu onamava angaphambili ekubekeni iithayile, ngelixa iigranite slabs zishiyeke kakuhle kwiingcali njengokuphathwa kunye nokufakwa kuyindinisa. Unokuqesha ikontraka okanye uthethe nomthengisi wakho wegranite ngeendleko zabasebenzi kunye noncedo olufunayo.
Ezinye iingcebiso ngokubanzi ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokufaka igranite:
Imilinganiselo kufuneka ithathwe ngokuchanekileyo. Njengoko kukhankanyiwe kwisihloko esidlulileyo sokulinganisa umphezulu wekhawuntara yakho, ubude, ubunzulu kunye nokuvulwa kwezixhobo ezifana noluhlu okanye isitovu sokupheka kunye nesinki kufuneka zichaneke.
Ukutshatisa umbala kukwabaluleke kakhulu. Akukho slab yegranite ifana ngokuchanekileyo, ukuqinisekisa ukuba izinto zakho zinombala osondeleyo, thenga igranite eyebatch efanayo.
Xa ungathandabuzeki, soloko uqesha ingcali. Izinto zokufaka eziphezulu ze-Granite zinobuchule kubugcisa babo ngenxa yamava abo kunye neminyaka abayichithe besebenza. Usenokuhlala udibana nomnye ukuba uyafuneka.
Ukufaka i-Granite Slab Counter ephezulu
Nali inyathelo ngenyathelo lesikhokelo seeprojekthi ezisebenzisa i-granite slab counter tops.
Ikhadibhodi elula okanye iphepha lekraft
Iteyiphu yompeyinti okanye itheyiphu yokugquma ubuso
Izikrufu (1-¼ ubungakanani)
UCaulking kunye nompu weCaulk
Amanyathelo okufaka i-Granite Slab Counter Top:
Oda ifomathi yekontraka ephezulu yokubonelela ngomthengisi wakho omthembileyo.
Yenza ubungakanani obugcweleyo bemilinganiselo yetafile. Unokusebenzisa iphepha okanye ikhadibhodi elula ngoku. Isizathu soko ayizizo zonke iindonga ezilinganiswe ngokugqibeleleyo kwaye isikhokelo siya kulunga ngokufanelekileyo. Faka konke ukuvulwa kwitemplate yakho.
Ukulungiselela iikhabhathi. Iincopho zokubala zeGranite zifuna ukuxhaswa ngeplywood ukuxhasa ubunzima besaladi. Ubungakanani obuqhelekileyo be-plywood substrate yi-intshi. Sika iplywood ukuze ilingane ngaphezulu kwekhabhathi esisiseko Khumbula ukusika kubungakanani obufanayo ngaphandle kwesibonelelo okanye ngaphezulu. Ukongeza ukongeza kwisinyibiliki sokuhlela.
Namathisela ukuxhaswa kweplywood kwikhabhinethi yesiseko ngokusebenzisa izikhonkwane. Okokuqala bhola umngxuma wokulinga ukugcina ukwahlula isakhelo sobuso kwikhabhinethi. Sebenzisa i-1, izikrufu ukukhusela endaweni kwaye uqiniseke ukuba ubeke izikrufu.
Sika umngxuma wokuntywila kumgxobhozo weplywood. Emva kokukhusela ukuxhaswa kweplywood endaweni, landela umgca we-sink kwi-plywood uze uqale ukusika. Sebenzisa i-jigsaw ukusika ujikeleze umngxuma wokuntywila kodwa uyenze ibe nkulu kancinci kunenkcazo oyizobileyo, malunga ne-1/8 intshi yanele. Yehla isinki endaweni. Baleka i-caulking ujikeleze isinki yomgxobhozo.
Ukulungiswa kwekhawuntala yegranite ephezulu. Okomileyo kufanelekile umphezulu wokubala we-granite ngaphezulu kwekhabinethi yesiseko ukuqinisekisa ukulunga okuchanekileyo Unokufuna isandla esongezelelekileyo ekwenzeni oku kuba iigrabs zegranite zinzima kakhulu. Ukuthintela ukophula ilitye, phatha igranite kwindawo emi nkqo. Ukuba ufuna ukususa isuntswana leemilimitha ukuze igranite ilingane, bhala izinto ngokusebenzisa isarha ejikelezayo enebala elinamacala amileyo. Uhlengahlengiso kufuneka lwenziwe ngononophelo olongezelelekileyo.
Sika umngxunya wokuntywila kumgxobhozo wakho wegranite. Sebenzisa umngxunya wokuntywila ngeplywood njengesikhokelo sakho. Unokusebenzisa isixhobo sokuguba ngombane esinesiciko sedayimane xa usika umphezulu womgangatho wegranite.
Faka umphezulu wekhawuntara. Beka i-granite endaweni ephezulu kweplywood.
Joyina iigram zegranite . Xa uqala ukufaka igranite slabs ngokudibeneyo, ungazitheyinta imiphetho ukuze uzikhusele. Ukujoyina i-seams, sebenzisa umbala osekwe kwi-epoxy. Qinisa izikrufu kwaye ugcine izikrufu ziqaqambile, ungasebenzisa isetter yomthungo. I-epoxy iyakoma ngeyure kwaye emva koko ungasusa iseti yomthungo. Isitshetshe esintlangothi-mbini mhlawumbi sisetyenziselwa ukucheba i-epoxy egqithisileyo. Khawukhumbule nje ukusebenzisa imivumbo njengoko ubambe isitshixo ngokuthe nkqo.
Qhoboshela umphezulu wekhawuntara phezulu kwiikhabhathi usebenzisa i-silicone. Faka isicelo se-silicone malunga nobungakanani bepenny ngesithuba esifanelekileyo see-intshi ezi-6 ukuya kwezi-12.
Beka i-caulking ejikeleze i-perimeter yekhawuntari, apho ilitye lihlangana khona nekhabhathi ephezulu.
Jonga iiseyile ngazo naziphi na izikhewu. Oku kunokugcwaliswa ngokusebenzisa i-resin esekwe kwi-polyester ehambelana nombala wamatye.
Faka isicelo sokutywina igranite ukukhusela ilitye lakho kwioyile, amabala kunye nokuchitheka kokungena kumphezulu walo. Qinisekisa ukogquma ngokupheleleyo kwaye yome iiyure ezingama-24
Ukufaka i-Granite Tile Counter ephezulu
Nali inyathelo ngenyathelo lesikhokelo seeprojekthi ezisebenzisa iincopho zetayiti zegranite.
Ukuxhaswa kwebhodi yesamente
Irabha padding grout edadayo
Isixhobo seCarbide sokufumana amanqaku
Amanyathelo okufaka i-Granite Tile Counter ephezulu:
Ukufakwa kweetafile zethayile yegranite kubandakanya inkqubo efanayo yokulungiselela esetyenzisiweyo ekufakweni kweeblabhuli zegranite.
Faka i-substrate yeplywood. Imiphezulu yeetafile zetayiti zeGranite zikwafuna ukuxhaswa kweplywood nge-intshi ngenkxaso. Sika iplywood ukuba ilingane ngaphezulu kwekhabinethi yesiseko kwaye ungeze into oyifunayo. Ukuba ufuna ikhangeleke ngathi iyatyeba, unokuyiphinda kabini iplywood. Imingxunya yokumba kwaye ukhusele iplywood ngaphezulu kweekhabhathi ezisisiseko.
Faka ibhodi yomgcini wesamente. Gubungela i-substrate yeplywood ngebhodi yokuxhasa isamente. Yinqumle ngesarha yesetyhula okanye uyikore ngesixhobo sokufaka amanqaku. Yijonge ngaphezulu kweplywood kwaye uncamathisele imicu yebhodi yesamente emi-2 emiphethweni.
Sika umngxuma wokuntywila kumgxobhozo weplywood. Sebenzisa i-jigsaw ukusika ujikeleze umngxuma wokuntywila kodwa uyenze ibe nkulu kancinci kunenkcazo oyizobileyo, malunga ne-1/8 intshi yanele. Yehla isinki endaweni. Baleka i-caulking ujikeleze isinki yomgxobhozo.
Beka iithayile zegranite. Sasaza isincamathelisi setile esincinanana kwibhodi yokuxhasa isamente. Beka iithayile zangaphandle emacaleni kuqala. Ukulungiselela ukuhlela, khumbula ukugqithisa iithayile.
Faka i-grout phakathi kwemigangatho yeethayile zegranite. Sebenzisa i-grout padded grout float ukufaka i-grout kwimigangatho uze usule ukugqitha ngesiponji esimanzi. Vumela ukuba zome iiyure ezingama-24.
Faka isicelo sokutywina kwimigca. Oku kuyakukhusela ngakumbi ekungcoleni nasekuchithekeni.
Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela yethu imibala lenyengane igalari ukubona iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwekhitshi.
Iindleko zetaxedo zokuqeshisa iimpahla zamadoda
ujessica caban kunye no-bruno mars umtshato
Umtshakazi ehamba ezantsi kumculo ophakathi kwendlela
uthengela ntoni ishawa yomtshato
Izipho ezincinci zokumkhumbula
Unina wanamhlanje womtshakazi unxiba